मनोरन्जन – Online Kendra
नेपाली विभिन्न मनोरन्जन जानकारी
एम.जि तामाङलाई बेस्ट कमेडी र मिडिया पर्सनको अवार्ड प्रदान
१२ असार २०७९, आईतवार १३:२८ OnlineKendra
काठमाडौँ । धादिङको थाक्रे १० केवलपुरमा जन्मिएका सञ्चारकर्मी तथा हाँस्य कलाकार एम.जि तामाङ अहिले कार्यक्रममा ब्यस्त छन् । रेडियो राजमार्ग ९२.१ मेगाहर्जमा काउकुती कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सञ्चार क्षेत्रबाट आफ्नो यात्रा सुरुवात गरेका सञ्चारकर्मी माधव घले अहिले दर्शक र श्रोताको ओठमा छुट्टै नाम एम.जि. तामाङबाट परिचित छ्न् । रेडियोमा काम गर्दै साङ्गितिक यात्रामा समेत यात्रा अगाडि बढएको सञ्चारकर्मी तामाङ विभिन्न राजनीतिक दलका ब्याक्तित्वहरुका आवाजको सजिलोसँग जस्ताको त्यस्तै अभिनय गर्न सिपालु छन्। आजभोली दर्शक र श्रोताका माया ममता र स्नेहका कारण दिनप्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम र गोष्ठी समारोहमा आफ्नो कलाकार प्रस्तुति दिन र…
मनोरन्जनएम.जि तामाङलाई बेस्ट कमेडी र मिडिया पर्सनको अवार्ड प्रदानLeaveacomment
सुजाताको स्वरमा ‘मेरो बोली सुन्दा’ गीतको फिमेल भर्सन सार्वजनिक (भिडियोसहित)
५ असार २०७९, आईतवार १२:११ NewsRoom
काठमाडौं : लोकप्रिय गीत ‘मेरो बोली सुन्दा’को फिमेल भर्सन सार्वजनिक भएको छ। यस गीतको मेल भर्सन ११ वर्षअघि गायक रुपक डोटेलको स्वरमा रेकर्ड भएको थियो। जुन गीत दर्शकले निकै रुचाएका थिए। सार्वजनिक गीतमा गायिका सुजाता केसीको स्वर सुन्न सकिन्छ। मुनाल शिशिर कोइरालाको शब्द रहेको यस गीतमा नरहरि प्रेमीको संगीत रहेको छ। गीतलाई उदय राज पौडेलले संगीत संयोजन गरेका हुन्। गीतको भिडियोमा दिक्पाल कार्की, रोशनी कार्की र इष्टु कार्कीको अभिनय रहेको छ। भिडियोमा त्रिकोणात्मक प्रेमकथा प्रस्तुत गरिएको छ। सुजन श्रेष्ठले छायाङ्कन गरेको भिडियोलाई मुनाल शिशिर कोइरालाले निर्देशन गरेका हुन्। भिडियोलाई दिन्सन शाहले…
मनोरन्जनसुजाताको स्वरमा ‘मेरो बोली सुन्दा’ गीतको फिमेल भर्सन सार्वजनिकLeaveacomment
‘मिस नेपाल २०२२’ को ग्रान्ड फिनाले आज हुँदै
४ असार २०७९, शनिबार १२:११ NewsRoom
काठमाण्डौ । ‘मिस नेपाल २०२२’ को ग्रान्ड फिनाले आज हुँदैछ । कोरोना महामारीको कारण अघिल्लो २ वर्षमा रोकिएको मिस नेपालको ग्रान्ड फिनाले यसपालि भौतिक उपस्थितिमा ललितपुरको गोदावरीमा आयोजना हुन लागेको हो । बेलुका गोदावरीमा हुने ग्रान्ड फिनालेमा २४ जना सुन्दरीले ताजका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । ८ सय जना सहभागी मध्ये २४ जना फाइनलका लागि छानिएका छन् । ९ वटा सब–टाइटलको विजेतासमेत घोषणा हुने तयारी छ । यसपटक मिस नेपाल वर्ल्ड, मिस नेपाल इन्टरनेसनल र मिस नेपाल अर्थ छानिने छन् ।
मनोरन्जन‘मिस नेपाल २०२२’ को ग्रान्ड फिनाले आज हुँदैLeaveacomment
‘चपली हाइट ३’ पुनः प्रदर्शन हुने
१ असार २०७९, बुधबार ०८:५२ NewsRoom
असार १, काठमाण्डौ । कोरोना संक्रमणका कारण सरकारले निषेधाज्ञा लगाउँदा सिनेमा हलमा प्रदर्शन हुँदाहुँदै रोकिएको फिल्म ‘चपली हाइट ३’ पुनः प्रदर्शन हुने भएको छ । गत वर्ष प्रदर्शनका क्रममा रोकिएको फिल्मलाई फेरि प्रदर्शन गर्न लागिएको हो । फिल्मका निर्माता अर्जुन कुमारका अनुसार फिल्म त्यतिबेला राम्रोसँग चल्न नपाएकाले फेरि प्रदर्शन गर्न लागिएको हो । उनले फिल्म निषेधाज्ञाका कारण हेर्न चाहेर पनि बञ्चित भएका दर्शकले पुनः हेर्ने अवसर पाउने बताए ।
मनोरन्जन‘चपली हाइट ३’ पुनः प्रदर्शन हुनेLeaveacomment
नेपाली फिल्म ‘कबड्डी ४’को प्रदर्शनमा भारतको सिक्किम सरकारले रोक लगाउने
३१ जेष्ठ २०७९, मंगलवार १३:४५ NewsRoom
जेठ ३१, काठमाण्डौ । नेपाली फिल्म ‘कबड्डी ४’को प्रदर्शनमा भारतको सिक्किम सरकारले रोक लगाएको छ । मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले राज्यका नागरिक र विभिन्न संस्थाको संवेदनालाई ख्यालमा राख्दै प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय भएको जनाए । ‘सिक्किमका जनता, विभिन्न संघसंस्था र संगठनको भावनालाई ध्यानमा राख्दै राज्य सरकारले विवाद समाधान नभएसम्म सिक्किममा कबड्डी ४ को प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।
मनोरन्जननेपाली फिल्म ‘कबड्डी ४’को प्रदर्शनमा भारतको सिक्किम सरकारले रोक लगाउनेLeaveacomment
बहुप्रतिभाशाली कलाकार एम.जि तामाङको लोकप्रियता बढ्दै !
२८ जेष्ठ २०७९, शनिबार १७:३६ NewsRoom
जेठ २८, धादिङ । धादिङको थाक्रे १० केवलपुरमा जन्मिएका सञ्चारकर्मी तथा हाँस्य कलाकार एम जि तामाङ अहिले कार्यक्रममा ब्यस्त छन् । रेडियो राजमार्ग ९२.१ मेगाहर्जमा काउकुती कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सञ्चार क्षेत्रबाट आफ्नो यात्रा सुरुवात गरेका सञ्चारकर्मी माधव घले अहिले दर्शक र श्रोताको ओठमा छुट्टै नाम एम.जि. तामाङबाट परिचित छ्न् । रेडियोमा काम गर्दै साङ्गितिक यात्रामा समेत यात्रा अगाडि बढएको सञ्चारकर्मी तामाङ विभिन्न राजनीतिक दलका ब्याक्तित्वहरुका आवाजको सजिलोसँग जस्ताको त्यस्तै अभिनय गर्न सिपालु छन् । आजभोली दर्शक र श्रोताका माया ममता र स्नेहका कारण दिनप्रतिदिन विभिन्न कार्यक्रम र गोष्ठी समारोहमा आफ्नो…
प्रविधि, मनोरन्जनबहुप्रतिभाशाली कलाकार एम.जि तामाङको लोकप्रियता बढ्दैLeaveacomment
बलिउड अभिनेता सलमान खानको हत्या प्रयास !
२७ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार १६:४७ OnlineKendra
जेठ २७,काठमाडौँ । बलिउड अभिनेता सलमान खानमाथि गोली प्रहारबाट हत्याको प्रयास भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार ग्याङस्टर लरेन्स बिस्नोइका सार्पसुटरले शुक्रबार मुम्बईमा हत्याको प्रयास गरेका हुन् । टाइम्स नेटवर्कलाई उद्धृत गर्दै सबै भारतीय सञ्चारमाध्यमले यो समाचारलाई प्राथमिकताको साथ प्रसारण गरिरहेका छन् । पञ्जाबी गायक सिद्धू मुसेवालाको हत्यामा संलग्न ठानिएको बिस्नोइ ग्याङका केही सार्पसुटरले खानको हत्याको प्रयास गरेका हुन् । सलमानको घरबाहिर सार्पसुटर पुगेर हत्याको प्रयास गरेको, तर अन्तिम समयमा फर्किएको फिल्मफेयरले जनाएको छ । लरेन्स बिस्नोइ ग्याङबाट आफूलाई कुनै खतरा नभएको भन्दै सलमान शुक्रबार बिहान घरबाहिर साइक्लिङमा निस्किएका थिए…
मनोरन्जनबलिउड अभिनेता सलमान खानको हत्या प्रयास !Leaveacomment
दोस्रो राष्ट्रिय ब्राण्ड म्युजिक अवार्ड २०७८ को ५ उत्कृष्ट मनोनयन सार्वजनिक
२२ जेष्ठ २०७९, आईतवार २१:१५ OnlineKendra
जेठ २२,काठमाडौँ । दोस्रो राष्ट्रिय ब्राण्ड म्युजिक अवार्ड २०७८ को उत्कृष्ट ५ मनोनयन कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । शनिवार काठमाडौंको प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न कार्यक्रममा विभिन्न ५० विधातर्फ उत्कृष्ट ५ जनालाई मनोनयन गरिएको हो । वरिष्ठ गायक सुरेश अधिकारी प्रमुख अतिथी रहेको कार्यक्रममा विभिन्न गायक, कलाकार, संगीतकार, भिडियो निर्माताहरूलाई मनोनयन गरिएको थियो । बरिष्ठ साहित्यकार लेखक प्रकास सायमीले अवार्डले स्रस्टालाई थप हौसला दिने बताए । महर्सी स्कुलका प्रीन्सिपल निर्मल पौडेल स्मिता स्नेहा इन्टर्टेन्मेन्टका ममता जिसी, गायक माइक खड्का, एभेन्ट मेनेजर सूर्य चन्द लगायतले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । नोमिनेसन कार्यक्रममा गायक…
मनोरन्जनदोस्रो राष्ट्रिय ब्राण्ड म्युजिक अवार्ड २०७८ को ५ उत्कृष्ट मनोनयन सार्वजनिकLeaveacomment
फिल्म ‘चिसो मान्छे’ नेपालसँगै अमेरिका र क्यानडामा पनि प्रदर्शन हुने
१५ जेष्ठ २०७९, आईतवार १२:४८ NewsRoom
काठमाण्डौ । दिपेन्द्र के खनालको निर्देशनमा बनेको फिल्म ‘चिसो मान्छे’ नेपालसँगै अमेरिका र क्यानडामा पनि एकै दिन प्रदर्शन हुने भएको छ। फिल्मको निर्माण पक्षले बताएअनुसार फिल्म असार ३ गते नै क्यानडा र अमेरिकाका विभिन्न सहरमा प्रदर्शनमा आउने भएको हो । कोरोनाकालको समयमा श्रीमानको शव लिन काठमाडौं आएकी महिला र शव लिएर घर फर्किदाँको कथालाई फिल्ममा महिलाको मनोविज्ञानको विषयलाई समेटिएको छ। केही दिनअघि फिल्मका ट्रेलर सार्वजनिक हुँदा फिल्मलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेको थियो। खनालको निर्देशनमा बनेको फिल्मको कथा तथा छायांकन पनि उनैले गरेका छन्। डिएस डिजिटलको ब्यानरमा बनेको फिल्मलाई शर्मिला पाण्डेले निर्माण…
प्रविधि, भिडियाे, मनोरन्जनफिल्म ‘चिसो मान्छे’ नेपालसँगै अमेरिका र क्यानडामा पनि प्रदर्शन हुनेLeaveacomment
१४ जेष्ठ २०७९, शनिबार १६:०२ NewsRoom
जेठ १४, काठमाण्डौ । ‘कबड्डी’को चौंथो श्रृंखलाले नेपाली बक्सअफिसमा ओपनिङ कीर्तिमान कायम गरेको छ । मुलुकका डेढ सय हलबाट रिलिज भएको फिल्मले पहिलो दिन शुक्रबार २ करोड ९० लाख रुपैयाँ कमायो । यो कमाइ कुनै नेपाली फिल्मले घरेलु बक्सअफिसमा कायम गरेको ओपनिङको व्यवसायिक कीर्तिमान हो । यसअघि ‘छक्कापञ्जा २’ ले फिल्म रिलिज भएको पहिलो दिन १ करोड ८० लाख रुपैयाँ कमाएको थियो ।
भिडियाे, मनोरन्जन‘कबड्डी’को चौंथो श्रृंखलाले नेपाली बक्सअफिसमा ओपनिङ कीर्तिमान कायमLeaveacomment